कुखुराको भाले ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा कुखुराको भाले ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा
कुखुराको भाले ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा
एजेन्सी, १५ भदौ । चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक मुद्दामा प्रहरीले मानिसहरुलाई जेलमा थुनेको त सुनैकै कुरा हो तर, आज हामीले प्रहरीको हिरासतमा रहेको कुखुराको भालेको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौ । प्रहरीले दुईटा भालेलाई ३० दिनदेखि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले उनीहरुमाथि सट्टेबाजीको आरोप लगाएको छ ।
वास्तवमा मकर संक्रान्तिको पर्वमा दुईटा भाले लडाउने खेल भईरहेको थियो । मानिसहरुले भालेमाथि सट्टेबाजी लगाएका थिए । प्रहरीलाई यो सुचना प्राप्त भएलगत्तै समयमै पुगेर १० जना भाले लडाउने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्योे । केही भने भाग्न सफल भए ।
मानिस र दुई कुखुराको भालेलाई पनि प्रहरीले सँगै नियन्त्रणमा लिएको हो । केही दिनपछि मानिसहरु धरौटीमा छुटेपनि भालेहरुलाई हालसम्म कोही जमानतमा छुटाउन आएका छैनन् ।
हालसम्म दुई भालेलाई कोही छुटाउन गएका छैनन् भने कसैले दाबी पनि गरेका छैनन् । लिहाजा प्रहरीले भालेलाई मस्त खुवाएर राखेको छ ।
एक मिडिया रिपोर्टको अनुसार भालेलाई स्थानिय प्रहरीले अदालतले सुनुवाई गरेपछि छाडीदिने जनाएको छ । अदालतले उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिए तुरुन्त छाड्ने योजनामा प्रहरी रहेको छ । सबैभन्दा धेरै मुल्य दिने व्यक्तिलाई भाले दिने भनिएको छ । पक्राउ परेका १० व्यक्तिको बाइक पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
Previous articleसबैभन्दा छिटो करोड क्लवमा पुग्ने नेपाली गीत बन्यो विष्णु माझीको ‘चरी जेलैमा’
Next articleमोडल निशा घिमिरेको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था यस्तो!
बाख्राको पाठाको अनौठो विश्व कीर्तिमान !
थाइल्याण्डमा कुखुरालाई किन खुुवाइन्छ गाँजा ?
आफ्नो जीउमा ६ लाख ३७ हजार मौरी राखेर विश्व कीर्तिमान
यस्तो छ आजको मौसम, यी क्षेत्रहरुमा बर्षा तथा हिमपात हुनसक्ने
आगामी शनिबारसम्म देशको कुन भूभागको मौसम कस्तो? यस्तो छ मौसमविद्को भविष्णवाणी
७ दिन मात्र होईन निषेधाज्ञा १५ दिन लम्बिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय